Iindaba -Umthengi ufumene oomatshini bakhe
Umthengi ufumene umatshini wakhe wokubopha umda, ipaneli yesarha, umatshini oshushu wokushicilela kunye nesar band. Kwaye ndafaka oomatshini ngempumelelo！
Eyona njongo iphambili yesilayidi esityibilikayo kukubona iipleyiti ezinkulu zeefomathi (iziqwengana) kwiipleyiti ezahlukeneyo ezihlangabezana nobungakanani beenkcukacha ezithile kunye neemfuno zokuchaneka. Umphezulu wale mibhalo mikhulu ifomathiweyo ayinakupeyintwa okanye ipeyintwe. Ngokwesiqhelo, ubungakanani beepleyiti ezichaziweyo emva kokucheba itafile yesilayidi esityibilikayo ichanekile, kwaye isarha umphezulu ucabalele kwaye ugudile, kwaye unokungena kwinkqubo yokulandela (enje ngokubopha umda, njl.) Ngaphandle kokuqhubeka kokugqiba.
I-Woodworking sliding tafile yeesafile ezineebhentshi ezisetyenziswayo zisetyenziswa ngokubanzi, hayi kuphela iinkuni ezithambileyo nezilukhuni, iplywood, ifayibha, i-particleboard, kunye nelinye okanye omabini amacala agqunywe nge-veneer, iphepha, iplastiki, isinyithi esingenantsimbi okanye i-wax-coated veneer, njl. , Sawing ethe tyaba okanye engile ukufumana iipaneli ezinobukhulu obuhlangabezana nokubalulwa; kwangaxeshanye, inokusetyenziselwa ukusika iipaneli zeplastiki ezahlukeneyo, iiphaneli zokwambathisa, iiphaneli ezincinci zealuminium kunye neeprofayili zealuminium; ezinye izixhobo zoomatshini zikwanazo nezixhobo zokugaya, ezinokuthi ziqhubekeke ngemijelo kunye neelwimi kunye nemijelo enobubanzi obungama-30-50mm. Ngexesha lokuqhubekeka, i-workpiece ibekwe kwindawo yokutyhala ngesandla, ukuze umsebenzi uqonde intshukumo yokutya, efanelekileyo kakhulu.
Umatshini wokubopha umthi wokhuni ulungele ukubopha ngokuthe ngqo kunye nokucheba i-fiberboard ephakathi, ibhodi eqinileyo, ibhodi yeplanga eqinileyo, ibhodi yamasuntswana, iphaneli yomnyango wepolymer, iplywood, njl njl. nisishiye, kwaye nisishiye sibotshelelwe. Ngemisebenzi enje ngokudibanisa, ukolula, ukutyibilika, ukusika okurhabaxa, ukusika okuhle, ukukrwela kunye nokupholisha, umda wokutywina ubuthathaka, ucocekile kwaye uziva ulungile, kwaye umgca wokutywina ulungile kwaye ugudile.
Umatshini oshushu oshicilelweyo usetyenziselwa ukulungiswa kweefenitshala zezityalo zefenitshala, izityalo zokuvelisa umnyango, kunye neepaneli ezisekwe ngomthi. Ngomnye woomatshini abaphambili bokusebenza ngomthi. Isetyenziselwa ikakhulu ukushushubeza kunye nokubopha ifanitshala yefanitshala, izahlulelo zokwakha, iingcango zomthi, kunye neengcango ezingatshiyo. , Isetyenziselwa iplywood, ukhuni oluhle, ibhodi yamasuntswana, i-MDF, izinto ezahlukeneyo zokuhombisa, amalaphu okuhombisa, i-veneer, i-PVC, njl., Kananjalo inokusetyenziselwa ukomisa kwe-veneer, ukulinganisa kunye nokulinganisa iichips zemibala yokuhombisa. Stereotype, isiphumo siyamangalisa.